चितवनको रत्ननगर–१२, स्थित घेघौलीका ८७ वर्षीय बन्धुराज न्यौपानेको बुधबार बिहान ६ बजे निधन भएको छ । लमजुङको दुराडाँडामा १९८८ मंसिर ७ गते जन्मिएका न्यौपाने २०१३ सालमा बसाइँ सरेर चितवन झरेका थिए । उनको श्रीमती निर्मलादेवी न्यौपाने, छोराहरु डा विजयराज न्यौपाने, रामहरि न्यौपाने, रामराज न्यौपाने रहेका छन् । यस्तै चार नाति र एक नातिनी छन् । उनको बुधबार नै देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेका स्व न्यौपानेको सम्मानमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति टीकाराम न्यौपाने, टेकप्रसाद गुरूङ सचिव उत्तम जोशी र राजीव न्यौपानेले पार्टीको...
प्रेस बिज्ञप्ती श्रीमान पत्रकार ज्युहरु , तीन न प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौडा तोकियोस भन्ने हाम्रो माग हो ।प्राबिधिक र भबिश्यलाई मुल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्दा सबैको हित हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।यस सम्बन्धमा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नपर्ने र भन्नपर्ने सबै ठाउ र व्यक्तीलाई भनेका पनि छौ र दबाब दिने काम निरन्तर गरेका पनि छौ । आजको समाचारहरुमा अन्यत्रै अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरा आउदा हामीलाई नराम्रो लाग्नु स्वभाबिकै हो ,भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहनु भएका कमल थापाले चुनाव अगाडी अस्थायी राजधानी...
०१ मङ्सिर, २०७४ जन दबाब समुह मकवानपुरको आयोजना एबं समुहका संयोजनकर्ता ध्रुब प्रसाद चौलागाईको संयोजनमा आज हेटौडामा3न प्रदेशको राजधानी हेटौडालाई बनाउन अब के गर्ने भन्ने विषयमा एक सर्व पक्षीय,सर्वदलिय भेला सम्पन्न भएको छ । उक्त भेलामा मकवानपुरमा3न प्रदेशको राजधानी वनाउनको लागि होटल संघले सभासदलाई होटलमा निशुल्क वस्ने सेवा दिने, नारायणी यातायात व्यवसायी संघले3न प्रदेशका सभासदलाई देशको जुन सुकै ठाउवाट पनि सेवा दिने,मकवानपुर उध्दयोग वाणीज्य संघले प्रदेश सभा संचालन गर्न पल्पसा सभा गृह दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन । मकवानपुरका सबै उम्दवारलाई3न...
१)बार्ताबाट मात्रै शान्ति हुन्छ भन्ने व्यानर सगरमाथामा फहराइयोे । २) सुरुङमार्ग बनाउन पुनः फैसला बमोजिम सर्वाेच्चमा दबाब दिने । ३)मध्यमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्र रहेको मकवानपुरको हेटौडालाई ३ न. क्षेत्रको सदरमुकाम बन्नुपर्ने कुरा पार्टीहरु घोषणापत्रमा नै राख्न लगाउनु पर्दछ । ४) हेटौडाको चौकीटोलदेखी सामरी पुलसम्म र सामरी पुलदेखि सामरी धादिङसम्म ताल बनाउनुपर्दछ । ५) अर्काे वर्षदेखि एउटा वडामा एउटा फलफूलको विरुवा रोप्ने अभियान चलाउन कृषि र वन विज्ञहरुलाई विरुवा तयार गर्न समन्वय गरी तुरुन्तै काम सुरु गर्ने र अर्काे वर्षसम्म बिरुवा तयार गर्ने । ६)मकवानपुरमा...
वर्षाको कारण गभ्भीर क्षति, रेडक्रसकर्मीहरु अहोरात्र खटिदै गएको दुइहप्तामा वाढी र पहिरोको कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा ६४ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै, ४४ जना घाइते भएका र १६ जना हराइरहेका छन् । वाढी तथा पहिरोले १९ हजार ८ सय १९ परिवार प्रभावित भएका र झण्डै दुइहजार परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् । विपद्को कारण २९ जिल्लामा २ हजार १ सय त्रिपन्न घरहरु आँशिक क्षती भएका छन् भने ७ सय अठ्ठाइस घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यो दुइहप्तामा ४ सय ४५ रेडक्रसका स्वयँसेवकहरु सेवार्थ खटाइएको छ । गएको दुई दिनको अविरल वर्षा गत दुइ दिनको अविरल वर्षाको कारणमात्र कम्तिमा ३० जनाले ज्यान...
काठमाडौं : अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीको टोली रामेछापको खिम्ती पुगेर बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको छ। अनेरास्ववियु केन्द्रीय टोलीले रामेछाप जिल्ला नेतृत्वको सहभागितामा मंगलबार खिम्चीका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको हो । चामल, चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट, कपडा, टेण्टलगायत विभिन्न सामाग्री वितरण गरिएको अनेरास्ववियु सचिवालय प्रमुख माधव पन्तले जानकारी दिनुभयो । ‘दुःखमा साथ दिने जनताको साथी अनेरास्ववियु भएकाले रामेछापको खिम्तीका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेका हौं' उहाँले भन्नुभयो । रामेछापको लिखु र गोकुलगंगा गाउँपालिकाको सीमाना खर्पु खिम्ती बीचमा रहेको...
काठमाडौं । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटमा अज्ञात समूहले शुक्रबार विहान सिलिन्डर बम विस्फोट गराएको छ । दुवाकोटको काठमाडौं मेडिकल कलेजनजिकै राप्रपाका नेता माधव खत्रीको घरअगाडि विहान करिब ३ बजे ठूलो आवाज आउने गरी सिलिन्डर बम विस्फोट भएको खत्रीले जानकारी दिएका छन् । बम विस्फोट हुँदा खत्रीको घरका आठवटा झ्यालको सिसा र पुष्प प्रधानाङ्गको घरको चारवटा झ्यालको सिसा फुटेको महानगरीय प्रहरी वृत्त, थिमिले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवारको घरमा बम भेटिएको छ । गल्याङ प्रहरी चौकीका प्रहरी...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी श्रीलंका र थाइल्याण्डको भ्रमणका लागि शुक्रबार थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गरेकी छन् । पाँचदिने औपचारिक भ्रमणका लागि उनी बिहान त्यसतर्फ गएकी हुन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी श्रीलंका जान लागेकी हुन् । बुद्धजयन्तीका अवसरमा श्रीलंकाले मनाउन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वैशाख सम्मेलनको समापन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुनेछिन् । श्रीलंकाको राजधानी कोलोम्बोमा भइरहेको सम्मेलनको समापन वैशाख ३१ गते श्रीलंकाको दोस्रो ठूलो शहर क्यान्डीमा...
काठमाडौं । अहिले देशभरको मौसम बदली भएको छ । शुक्रबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ठाउँठाउँमा पानी परेको छ । पश्चिमी क्षेत्रमा भने बिहीबार राति पानी परेको थियो । पश्चिमी क्षेत्रबाट मध्य क्षेत्र हुँदै वायू बहिरेकाले काठमाडौंमा पनि पानी परेको हो । पानी पार्ने प्रणाली अझै केही दिन सक्रिय हुने भएकाले शनिबार, आइतबार पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्हरुले जनाएका छन् । चुनावका दिन आइतबार विशेषगरी पूर्व र मध्य क्षेत्रमा पानी पर्ने अनुमान छ । ...
भरतपुर, २८ वैशाख । गत बिहीबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले पत्र पठाएर क्रमशः भरतपुर महानगर प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गराएपछि कांग्रेस वृत्तमा देखिएको आक्रोश र असन्तोष क्रमशः मत्थर हुँदै गएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । मुख्य चार दलमध्ये अग्रस्थानमा रहेको र जितको नजिक रहेको कांग्रेसले महानगर प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई जिताउन गठबन्धन गरेपछि असन्तुष्ट बनेका अधिकांश कांग्रेसी नेता र कार्यकर्ता अहिले महानगर प्रमुखमा रेणु दाहाल र...
सामाजिक सञ्जालबाट करोडौं बाहिरियो
काठमाण्डौ । तपाईँको फेसबुक तथा ट्विटर वालमा पछिल्लो समय कति त्यस्ता पोस्ट आएका हुन सक्छन्, जसमा ‘स्पोन्सर' लेखिएको छ। ती ‘स्पोन्सर' लेखिएका सबै पोस्ट तपाईंलाई लक्षित गरिएका हुन्। यसरी ‘स्पोन्सर'का नाममा गत एक महिनाको अवधिमा हजारौं संख्यामा फेसबुक तथा ट्विटरमा पोस्ट छाएका छन्। यी पोस्ट विशेषगरी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर राखिएका हुन्। यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिर पठाइसकेका छन्। दैनिक लाखौं रुपैयाँ यसरी बाहिरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्ष्य गरी अहिले राजनीतिक दलले आफ्नो फेसबुक,...
‘जेठ ३१ को निर्वाचन तलमाथि हुँदैन, मिति सारिए निर्वाचन गर्न सकिदैन्’
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले भनेपनि अब जेठ ३१ को दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ, जेठ ३१ गतेको निर्वाचन तलमाथि हुँदैन् ।’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै यादवले जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति बजेट अघि नै गर्ने कुरा चलिरहेको सन्दर्भमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने,‘निर्वाचनको मिति तोक्ने, सार्ने अधिकार सरकारलाई छ, तर अहिले जेठ ३१ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तलमाथि गर्न हुँदैन, यदि...
माओवादी केन्द्रकी सचेतक र एमालेका उम्मेदवारलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले धादिङ जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिकाका नेकपा.(एमाले)का अध्यक्षका उम्मेदवार रामकुमार आचार्य र उपाध्यक्षका उम्मेदवारसमेतलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । आचार्यले बैशाख २५ गते तीन ट्रक प्रचारक सहितको स्कारपियो गाडी, ब्यानर एवं दल र निर्वाचन चिन्ह सहितको टि–सर्ट सहित मोटर साइकल र्‍यालीसमेत निकाली निर्वाचन प्रचार–प्रसार गरेको निर्वाचन आयुक्तको अनुगमनबाट प्रमाण फेला पारेको थियो । सोही आधारमा चौबीस घण्टाभित्र आयोगसमक्ष स्पष्टीकरण...
सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस'कलाकार सपना त जिन्दगीमा धेरै देखिए । तर, स्कुले जीवनदेखि काठमाडौं आउने संघर्षताका बढी सपना देख्थेँ । दुई–तीनवटा सपना अहिले पनि ताजै लाग्छ । ५–६ कक्षामा पढ्दा पटकपटक देख्ने गरेको एउटै सपनाको याद भइरहन्छ । चारबाट पाँच कक्षामा जाँदा पहिलोपल्ट दोस्रो भएको थिएँ । त्यसपछि एसएलसीसम्म लगातार दोस्रो स्थानमा कायम रहेँ । दोस्रो भएकाले होला मलाई कक्षाको टोलीनेता बनाइएको थियो । तर, ममा भने ‘कन्फिडेन्स’ थिएन । हरेक रात सुत्नुअघि भोलिको चिन्ताले सताउँथ्यो । भोलि कसरी कक्षा ‘ह्यान्डिल’ गर्ने भन्ने सोच आउँथ्यो । यही असरले होला सपनामा खाली...
प्रधानन्यायाधीश कार्की काममा फर्किइन्, नौं बजे नै कार्यालयमा हाजिर
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नियमित काममा फर्किएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी आजदेखि काममा फर्किएकी हुन् । अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्की नियमित कामका लागि आज बिहान साढे ९ बजे नै अदालत पुगेकी हुन् । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमा नै उपयुक्त आधार र कारण नदेखिएको भन्दै त्यसमाथिको कारवाही अघि...